के राजेन्द्र खड्गीले मुक्काले राँगा ढा'लेकै हुन् त ? भिडिओ‌मा यस्तो भने - Himali Patrika
के राजेन्द्र खड्गीले मुक्काले राँगा ढा’लेकै हुन् त ? भिडिओ‌मा यस्तो भने
हिमाली पत्रिका १० चैत्र २०७७, 9:35 am
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा द्वन्द्व निर्देशकको रुपमा सर्वाधिक रुचाइएको नाम हो, राजेन्द्र खड्गी । एक दशक पहिला निर्माण भएका प्रायः चलचित्रको द्व’न्द्व निर्देशकमा राजेन्द्रको नाम हुन्थ्यो । चलचित्रमा द्ध’न्द्ध निर्देशक मात्र होइन, खलनायक भएर पनि उनी आफै काम गर्थे ।
लामो कपाल, जतिबेला पनि रिसाएको जस्तो देखिने अनुहार, ठूला आँखा । हेर्दा लाग्थ्यो, उनी रिल लाइफमा मात्र हैन रियल लाइफमा नै खलपात्र हुन । राजेन्द्र खड्गीले चलचित्रको पर्दामा आफूलाई सधै नकारात्मक भूमिकामा देखाएका छन् ।
यसैले पनि होला, उनलाई देखेर बाटोमा भाग्ने, कराउनेहरुको संख्या धेरै छ । खड्गीलाई चलचित्रमा हेर्नेहरु वास्तविक जीवनमा पनि उनी उस्तै छन् भन्ने सोच्नेरहेछन् ।
राजेन्द्रले आफ्नो चलचित्र करिअरमा पाँच सय बढी चलचित्रमा द्व’न्द्व निर्देशन गरेका छन् । पाँच सय बढी चलचित्रमा काम गर्दा उनी कैयौ पटक घा’इते भएका छन् भने कति हिरोको त उनले मु’क्का समेत सहनुपरेको छ । ‘म घा’इते नभएको कुनै चलचित्र नै छैन होला’, उनले भने, ‘मेरो कारणले भन्दा पनि अरुको कारण घा’इते बढी भएको छु । अब मेरो टु’ट्न बाँकी कमै मात्र अंग होला ।’
राजेन्द्र पर्दामा हेर्दा जती ड’रलाग्दा छन्, रियल लाइफमा त्यती नै फरासिला छन् । पाँच सय चलचित्रमा काम गरेका राजेन्द्रको जीवनमा चलचित्रसँग जोडिएका अनेकौ किस्सा छन् ।
कुनै ‘हातले मु’क्का हा’नेर राँगो ढाल्छ राजेन्द्र खड्गीले’ भन्ने गरिन्थ्यो । फिल्ममा खलपात्रको अभिनयका क्रममा उनले नचिन्ने सायदै भेटिएला ।
के साँच्चिकै राजेन्द्र खड्गीले मु’क्काले हानेर राँगो ढा’लेकै हुन् त ? के भन्छन‍् उनका बाल्यकालका साथी हेर्नुहोस् भिडियोमा